Relationships Archives - KSM Global
တကယ်လို့ သင်က သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားလေးတွေ ပြောပေးတာလောက် သူမကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေနိုင်တာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စာလေးတကြောင်းက သူမကိုချက်ချင်းပြုံးပျော်သွားစေမှာသေချာပါတယ်။ ကဲဒါဆို ဘယ်လိုချစ်စကားလေးတွေပြောလို့ရလဲ အခုပဲကြည့်ရအောင်။ (၁) ချစ်သူကောင်မလေးကို လှတယ်လို့ပြောပါ မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးလို့ သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကို မက်ဆေ့ချ်ပို့တဲ့အခါ “အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးရေ ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ”ဆိုတဲ့စာလေးပို့လိုက်ရင် သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ပျော်စရာမနက်ခင်းလေးတခုဖြစ်စေမှာသေချာပါတယ်။ (၂) မှော်ဆန်တဲ့စကား၃လုံးပြောပါ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ “I Love You”မှော်ဆန်တဲ့စကားလုံး၃လုံးက သင်သူမကိုခန,ခနပြောဖူးနေကြဖြစ်ပေမယ့်လို့ ပြောတိုင်း သူမကိုအမြဲပျော်ရွှင်စေမှာသေချာပါတယ်။ (၃) သတိရတယ်လို့ပြောပါ သင်ချစ်ရတဲ့သူက သင့်ကိုအရမ်းသတိရတယ်လို့ပြောရင် သင်ဘယ်လိုနေမလဲ? ဒီစာလေးက သင့်ကိုအမြဲပျော်စေမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို သတိရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ သူမအနေနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးပျော်ရွှင်ရမှာသေချာပါတယ်။ (၄) ချစ်သူကောင်မလေးကို သူမကြောင့်သင်ဘယ်လောက်ပျော်ရတယ်ဆိုတာပြောပြပါ သင့်ရဲ့ဘဝမှာ သူမရှိနေခြင်းကသင့်အတွက်ဘယ်လိုထူးခြားကောင်းမွန်လဲဆိုတာ အသိပေးပါ။ သူမကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာသိအောင် “မင်းမရှိရင် ငါ့ဘဝက ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတာမျိုးပြောလု့ိရပါတယ်။ […]
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ် ။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ (၁) အိပ်မက်မက်တယ် အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောမိ၊ မတွေးမိပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို သူအရမ်းလွမ်းပြီး သတိရနေလို့ပါပဲ ။ သင့်အကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါတွေးလွန်းပြီး သူ့ရဲ့စိတ်က သင့်အနားမှာပဲ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ပါပဲနော် .။ (၂) မထင်မှတ်ပဲတွေ့တယ် သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က အရမ်းလွမ်းတဲ့အခါ မမျှော်လင့်ပဲ သူနဲ့ဆုံတာမျိုး၊ မချိန်းထားပဲနဲ့ တစ်နေရာတည်းကို အတူတူရောက်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ သင့်ဖက်ကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ […]
အဲဒီနေ့ က သမီး က သမီးချစ်သူ ကိုအိမ်ခေါ်လာပြီး “အဖေ.. ဒါ သမီး ချစ်သူ သမီး သူနဲ့လက်ထပ်မယ်” လို့ ပြောခဲ့ တယ်နော်
သမီး… သမီးကို သူဆင်းရဲမယူနဲ့လို့ အဖေ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲ အဲဒီနေ့က သမီးက သမီးချစ်သူကိုအိမ်ခေါ်လာပြီး “အဖေ.. ဒါ သမီးချစ်သူ သမီး သူနဲ့လက်ထပ်မယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။နောက်တော့ သမီးကို အဲဒီလူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ အဖေပြောခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ သမီးမေးတော့ “ဆင်းရဲလို့” လို့ အဖေဖြေတယ်။ အဲဒီတုန်းက အဖေ့ကိုကြည့်တဲ့ သမီးရဲ့အကြည့်ကို အဖေမမေ့ခဲ့ပါဘူး။ သမီး ရဲ့အကြည့်ထဲမှာ ငါ့အဖေက ငွေမက် လိုက်တာ၊ ကြီးကျယ်လိုက်တာဆိုတာ ပါနေတယ်။အဖေဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ… ကိုယ့်သမီး အထင်လွဲသွားတာလောက် ခံစားရတာ မရှိပါဘူး သမီး“သူ ပိုက်ဆံမရှိလို့ပေါ့ ဟုတ်လား.. ဖေဖေ” လို့ သမီးပြန်မေးခဲ့တယ်နော်။ မဟုတ်ဘူး သမီး.. သူဆင်းရဲတာက ပိုက်ဆံ ဆင်းရဲတာ မဟုတ်ဘူး… သူဆင်းရဲတဲ့အချက် လေးချက်ကို အဖေတွေ့လိုက်တယ်။ (1)ရည်မှန်း ချက် […]
ချစ်သူဟောင်းနဲ့ပြန်တွဲတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်စေနိုင် ကိုယ်အရင်က လက်တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူရည်းစားဟောင်း၊ အဆက်ဟောင်း နဲ့ ခဏခဏပြန်တွဲလိုက်၊ ပြန်ပြတ်လိုက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက်ထိခိုက်စေလို့ အဆက်ဟောင်းနဲ့ အချစ်ရေးနွံထဲက ရုန်းထွက်လာဖို့လိုပြီလို့ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်အသစ်တွေကနေ သိရှိရပါတယ်။ အဆက်ဟောင်းနဲ့ပြန်တွဲတဲ့လုပ်ရပ်ဟာ စိတ်ပင်ပန်းမှု၊ စိတ်ဒုက္ခ၊ စိတ်ကျဝေဒနာတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ကျန်းမာရေးလက္ခဏာဆုတ်ယုတ်မှုတွေ ပြသလာစေနိုင်တယ်လို့ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ ပညာရှင်၊ မစ်ဇူရီတက္ကသိုလ်က မိသားစုသိပ္ပံပညာ ပါမောက္ခ ကေးလ်မန့်ခ် (Kale Monk) က ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ပြတ်စဲလို့ အသည်းကွဲရတာဟာ ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်ပြီး အချိန်အားဖြင့်ယာယီသာခံစားရတာဖြစ်တယ်၊ ချစ်သူဟောင်းနဲ့ပြတ်လိုက်၊ ပြန်တွဲလိုက် ဆိုတဲ့သံသရာကတော့ ကျန်းမာရေးကိုပာ ယိုယွင်းထိခိုက်စေတဲ့ အခြေအနေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် လို့ သူက ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ချစ်သူတွေပြတ်သွားကြတာက အမြင်သစ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားစေပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားကြသလဲဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ သိရှိစေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် […]
Long-distance relationships are quite hard to hold onto. Such relationships are not apt for everyone. Most of the long-distance relationships end, leavingabad taste in the mouth. You might think that with the advent of robust technology and an abundance of apps, it might become easier to pull off long-distance relations. But, it is […]
7 Reasons Why The Men Do Not Marry The Women They Date
April 7, 2020 April 7, 2020 admin2 Comments on7Reasons Why The Men Do Not Marry The Women They Date
There can be so many instances in which the couple broke up after spendingalong time with each other. After that, the guy found someone else and married them instantly. It happens everywhere and raises some serious questions like “What went wrong that the madly in love couple did not end up getting married […]
Love and romance can literally produce glitters and spark in your life. Without pure love, people cannot live to the fullest, life would be dull and boring and there would be absolutely no charm in spendingalife without the right amount of passion and tenderness. Being expressive and vocal about love isagood […]
A relationship becomes successful when both partners are putting in the same kind of effort. So, in order to makearelationship worthwhile, you need to developahabit of acknowledgment. You should acknowledge the little things that your girl does for you and vice versa! Girls are usually sensitive and are always looking for […]
A relationship has to be filled with love, care, and affection. But, if any of the partners is not giving the right kind of attention, then there will be problems. A woman has to look for the signs and check thoroughly if the partner suits them or not. Otherwise, in the future, there will be […]
Asachild, almost everyone thinks about livingahappy life and involving in wonderful wedlock. But, no one imagines the worst that could happen inarelationship. However, you must have the audacity to face reality. Let’s come out of the fictional movies in which you have been living and weaving unrealistic dreams of […]